C++ gui - MYSTERY ZILLION
October 2009 edited March 2011 in C++
ကျွန်တော်ကအခုမှ C++ ကိုလေ့လာနေသူတစ်ဦးပါ
သိချင်တာတစ်ခုက program ကို run ရင် cmd command နဲ့ run ပါတယ်
အဲဒါကို GUI အနေနဲ့ ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပါသိိချင်ပါတယ်
ပြီးတော့ မြန်မာလို့ run လို့ရလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်
မြန်မြန် reply ပြန်နိုင်ကြပါစေ:D:D
GUI လိုချင်ရင်တော့ C# ဒါမှမဟုတ် VB.NET သုံးလိုက်ပါ။
C++ မှ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့
သူများတွေရေးထားတဲ့ C++ progarm တွေလိုမျိုးဖြစ်အောင်
Api တွေ သုံးရမှာပါ။ API သုံးပြီးရေးရင် form လေးတစ်ခုရဖို့ အရမ်းအချိန်ကုန်သွားမယ်။ C++ ကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ processing အပိုင်းအတွက်ပဲ အဓိကအသုံးပြုမယ်။ memory management တွေ hardware level တွေကိုတော့ C++ နဲ့ ရေးနေဆဲပဲ။ Windows GUI တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ C# ဒါမှမဟုတ် VB.NET ပြောင်းလိုက်ပေါ့။
Api ဆိုတာဘာလဲဟင် ပြီးတော့ form ရေးရင်အချိန်ကုန်မယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ
ဘာခက်တာမှတ်လို့ C++ ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင် Visual C++ မှာရေးပေါ့ခင်ဗျ။ VC နဲ့သာရေးမယ်ဆိုရင် Window ပေါ်မှာ အပ်ကနေ ဒုံးပျံအထိ အကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ VC ဆိုတာ အခုခေတ်မှာ Traditional Win32 Programming လိုရေးတဲ့ခေတ်မှ မဟုတ်တော့တာပဲ C#, VB တို့လိုပဲ တော်တော်လေးလွယ်သွားပါပြီဗျ။
မှန်ပါ့။ VC ကိုမေ့နေတာ။ VC ကို မသုံးတာ ကြာတော့ မေ့သွားပြီ။ C++ မသုံးပဲ VC စသုံးကြည့်ပါ။ programming စလေ့လာကာစဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် API ကို မသိသေးတာပါ။ နောက်ပိုင်း သိလာပါမယ်။ API , Active X တွေသုံးတတ်လာမှာပါ။ VC ကို စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Vc ဆိုတာ vb c++ ကိုပြောတာလားဟင်
question wrote: »
VB C++ ဆိုတာမရှိပါဘူးဗျ Visual C++ လုပ်ပါ။ အဲဒီ့မှာကြည့်ဗျာ
အစ်ကိုရေ အဲဒီ Visual C++ 2008 ကအင်တာနက်ရှိမှရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟင်
မဟုတ်ပါဘူးဗျ ရပါတယ် အင်တာနက်ရှိရင်တော့ Help ကို Online MSDN သုံးလို့ရမယ် မရှိလည်း Off Line MSDN ပါလာပြီးသားပါ။ ပရိုဂရမ် ရေးတာကတော့ အင်တာနက်ရှိစရာမလိုပါဘူး ရေးလို့ရပါတယ်ဗျ ဒေါင်းရမှာပျင်းရင်တော့ ဆိုင်ကနေသာ Visual Studio ကိုဝယ်လိုက်ပေါ့ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒေါင်းရင်တော့ Express Edition ကိုပဲဒေါင်းလို့ရမယ် ဆိုင်ကနေဝယ်လိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ရှာလို့မခက်ပါဘူး ပေါပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် install လုပ်ရင်ဒီလိုပေါ်လာပြီးဆက်မတက်တော့ဘူးဗျာ
ရန်ကုန်မှာ နေတာမဟုတ်လား။ national က ဖြစ်ဖြစ် active ကဖြစ်ဖြစ်ဝယ်လိုက်။ professional edition ရမယ်။ ၁ ခွေ မှ ၁ ထောင်ပဲ ပေးရတာ။ express edition သွင်းတော့ connection လိုတာပေါ့ဗျ။ professional အခွေသာ ဝယ်ပြီးသွင်းလိုက်။
QB လဲ သုံးလို့ရတယ်။ သူက Linux အတွက်။ ၀င်းဒိုး Form တွေမှ လိုချင်ရင်တော့ Visual C++ ကို သုံး။
အားတာကိုစောင့်နေတုန်း google မှာ api wiki လို့ရိုက်ထည့်ပြီး နည်းနည်းလေ့လာထားလို့ရမလား?
Windows, Linux, Mac အားလုံးမှာလဲ ရေးချင်တယ်။ GUI လဲ ဖြစ်ရမယ်။ လိုအပ်ရင်လဲ အခြေခံကျကျ ပြန်ပြင်လို့ရ ရမယ် ဆိုရင်တော့ Qt C++
ဖိုင် ဆိုဒ်နည်းနည်းကြီးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကဆိုရင် ၂ ခါ ၊ လောက်ခွဲပီး ဆွဲမှ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်
တစ်ခုမေ့သွားလို့ Symbian & Nokia Phone တွေမှာလဲ ရတယ်..(ကျွန်တော်လုပ်တာတော့ ရွာလည်တုန်း.. )
Not really! Implementing GUI is not that difficult. Qt works well with native C++. It depends on target platform. For windows, we can use MFC API (Application Programming Interface). windows form framework from .Net in Visual C++. Mozilla Firefox is written in C++, for instance. Visual C++ is not actually platform independent.